Letha ikhebula leJumper nebhange lamandla elingakusiza ukuqala injini yemoto ezimweni eziphuthumayo - iConnexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Letha ikhebula leJumper nebhange lamandla elingakusiza ukuqala injini yemoto ezimweni eziphuthumayo
Kwesinye isikhathi udinga iJumper Cable kanye nebhange lamandla ngenkathi wenacan’qala injini yemoto
Kungaba nezinkinga nganoma yisiphi isikhathi ngesikhathi sokushayela. Isibonelo, i-air conditioner ayikwazi ukubamba umlilo uma ivulwe kakhulu, noma ugesi ungekho. Udinga nje isimo esiphuthumayoIkhebula leJumperkanye nebhange lamandla ukuqala injini yakho.
Umgogodla ongaphakathi weBold, uphephile ukusebenzisa ugesi, anti-okokuqandisa nokulwa nokuqhekeka, isibambo esifakwe ngci esigcwele, esiphephile ukusisebenzisa.
Noma imoto ilunge kangakanani, kuzoba nesiteleka. Lapho kungekho noyedwa ocela usizo, kanjani ukwenza uma kungekho ocela usizo. Phatha lesi siqalo esiphuthumayo ngemoto, qala ngokushesha, futhi imoto kadizili izokwenza kokubili, yenze ukuhamba kwemoto yakho kungakhathazeki.
Amalambu amaningi asebhange alula, athwala kalula, anamandla, umzimba omncane namandla amakhulu
Inkomba ejwayelekile yekhebula le-CCTV